Itoophiyaa fi Masriin Laga Abbayaaa Irratti Dubbiin Wal Qoqqolumatti Jiran, Taatullee Marii Fedhan.
WASHINGTON,DC — Itoophiyaan laga Abbaayaa irratti Humna Electirikii galfachuutti jirti.Hujii tanallee doolara biliyoona hedduutiin hojjachuutti jirti.
Masriin akka hujiin laga kana irratti hojjatan jireenna isii tuxxu hin feetuu, Itoophiyaan ammoo yoo Masriin bisaan qabdu seeraan fayyadamtee rakkoo jalaa bahuu dandeetti jeeti.Akka jecha perzdaantii Masrii, Mohammed Morsiitti ammoo falii fedhelleen mariif carraa qaba.
"Namii tokkolleen qooda masriin bisaan irratti qabdu irratti nutti bu’u ykn nutti findhaaru hin feenu.Ani akka perzdaantii biyyaatti dubbii tana waan cufaan faluuf irratti hojjachuuf carraan akka jiru isanii mirkaneessuu fedha."
Itoophiyaan ammoo wannii hujii Hidhaa Abbaayaa dhaaba hin jirtu jetti.oduu himaan ministry haajaa alaa Itoophiyaa obboo Geetaachoo Reddaalleen dubbiin perzdaantiin Masrii Mohammed Morsii jedhe barbaada waraanaa ka perzdaantiin isaanii ka durii Hosnii Mubaarek jechaa bahe.
“Perzdaanti Morsiin woma bulchaan isaanii ka durii jedhee diqqumaa hujiitti hin jijjiirin sun jechuun waan garaa nama nyaataati.Dubbii dhama hin qamne ka perzdaandti Morsiin ummata garaan gargar bahetti himuutti jiru tun akkuma jirtuunuu dubbii garaa hin galle jechuun dhiba.”
Itoophiyaan hujii Hidhaa Abbayaa tana hojjachuuf bisaan Abbayaa jalliftee hujiittiin jirti.Masriin ammoo madda jireennaatti nurraa jallatee jettee dubbatti.
Akka bulchoota Itoophiyaatti seera jabana biyyiti hedduun kolonii jala jirtu ka bara 1959 bahetti seera malee akka Masriin bisaan qooda isii malee argattu tolche.
Ambaasaadder Ahmed Haggag,itti gaafatamaa waldaa Hawaasa Afrikaa akka dubbii Masrii fi Itoophiyaa tana Tokkummaan Mootummootaa ilaalu fedha.
Woma taateefuu jarii lamaanuu dubbi tana karuma nagaatiin mariin fixachuu fedha. Masriin ammoo jaarrolee marii Finfinneetti erguuf qophii jirraa jetti.